Arsenal oo dalab ka gudbisay xiddig u ciyaara Barcelona – Gool FM
Arsenal oo dalab ka gudbisay xiddig u ciyaara Barcelona
Haaruun June 24, 2020
(London) 24 Juun 2020. Maadaama ay Arsenal ku billaabatay si liidata dib usoo laabashada horyaalka Premier League, sidoo kalena ay soo food saareen dhibaatooyin dhaawacyo iyo ganaaxyo, waxay dooneysaa inay dib u qaabeyn xooggan ay ku sameeyaan safkooda.
Gunners ayaa dalab ku aaddan saxiixa Goolhaye Neto u gudbisay kooxda Barcelona si ay ugu daboolaan booska Bernd Leno oo dhaawac daran uu ka soo gaaray kulankii ay guuldarrada kala kulmeen Brighton & Hove Albion.
Dhaawaca soo gaaray Leno ayaa ah mid daran, waxaana suuro gal ah inuu inta ka dhiman sanadkan 2020 uu garoommada kaga maqnaado, inkastoo wali Macallin Mikel Arteta uusan war cad kasoo saarin dhibaatada jilibka kasoo gaartay xiddiga Jarmalka ah.
Arsenal ayaa dooneysa inay amaah ku qaataan Neto, balse Barca ayaa dooneysa inay xiddigan iibiyaan xagaaga si ay isula ekeysiiyaan xisaabteeda kala iibsiga.
Kooxda La Liga difaacaneysa ayaa xiddiga reer Brazil ku qiimeysa 20 milyan oo uero, inkastoo kaliya uu afar kulan u ciyaaray tan iyo markii uu sanadkii hore ugu soo dhaqaaqay qiimo dhan 23.3 milyan oo euro.
The Sun ayaa warineysa in Gunners ay sidoo kale isha ku heyso Joe Hart oo wehel ka dhigtay kursiga keydka ee kooxda Burnley.
Mid ka mid ah kubbad abuurayaasha ugu wanaagsan qaaradda Yurub oo baxsad u ah Liverpool
Da'yarkii hore ee Kooxda Chelsea,Tariq Lamptey oo jabiyay rikoor siddeed sano u yaallay Harry Kane